SAWIRRO: Diyaarad Garoowe geysay baabuur aan xabadu karin, Yaase iska leh? – Puntlandtimes
SAWIRRO: Diyaarad Garoowe geysay baabuur aan xabadu karin, Yaase iska leh?
GAROOWE(P-TIMES) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duulimaad diyaaradeed oo subaxnimadii hore ee saaka la sheegay in uu ka dagay magaalada Garoowe, kaas oo waday baabuur aan xabadu karin, waxaana la sheegay in diyaaraddan ay kasoo duushay magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya.
Diyaaraddan ayaa la sheegay in ay waday baabuur aan xabadu karin, waxaana la rumeysan yahay in uu leeyahay musharax kamid ah musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Puntland, kaas oo lafilayo in uu dhawaan soo gaaro magaalada Garoowe.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo baabuurtan la keenay magaalada Garoowe, xili magaalada Baydhabo oo ay doorasho ka dhacaysa 17-ka bishan November ayaa la geeyey baabuur aan xabadu karin oo lagu taageeray musharaxiin kala duwan.
Waa nin baqaaaya, dad uu rabo in ay doortaan ayuu ka baqayaa, hade hal baabuur ma isku difaaci karaa?.
Farmaajo soo ma aha kii ku dhex lugeeynayey bulshada puntland isagoo xaataa qabin garanka xabadu kariin. Ma musharixiintiisa ayuu Reer Puntland ku aamini waayey???. Waa arin siyaasad loga danleeyahay oo puntland ayaa la rabaa in waji aan nabad ahayn loo yeelo. Gudiga doorashooyinka puntland waa in aysan siin ruqsad musharaxnimo shaqsigii dhaawac u geysanaya nabadgalyada ay puntland ku sifoowday. Laamaha amaankuna waa in ay baabuurtaas bakhaar ku xareeyaan.